मुख्य विचारहरू जब एक बिन्दु बिक्री (POS) प्रणालीहरू छान्दै | Martech Zone
मुख्य विचारहरू जब एक बिन्दु बिक्री (POS) प्रणालीहरू छनौट गर्दा
शुक्रबार, डिसेम्बर 27, 2019 शुक्रबार, डिसेम्बर 27, 2019 Douglas Karr
बिक्री को बिन्दु (POS) समाधानहरू एक पटक तुलनात्मक रूपमा सरल थिए, तर अब विकल्पहरूको विस्तृत श्रृंखला छ, प्रत्येकले प्रदान गर्ने अद्वितीय सुविधाहरू। एक मजबूत बिक्री सेवा को बिन्दु तपाइँको कम्पनी लाई महत्वपूर्ण र अधिक कुशल बनाउँदछ र तल्लो रेखा मा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
POS के हो?
A बिक्री को बिन्दु प्रणाली हार्डवेयर र सफ्टवेयरको एक संयोजन हो जुन एक व्यापारीलाई बिक्री गर्न र स्थान बिक्रीमा भुक्तानी स collect्कलन गर्न सक्षम गर्दछ। आधुनिक POS प्रणालीहरू सफ्टवेयरमा आधारित हुनसक्दछ र कुनै पनि जेनेरिक मोबाइल फोन, ट्याब्लेट, वा डेस्कटप प्रयोग गर्न सक्दछ। पारम्परिक POS प्रणालीहरूमा टच स्क्रिन समर्थन र नगद दराज एकीकरणको साथमा स्वामित्व हार्डवेयर समावेश हुन्छ।
यो लेखले तपाइँको व्यापारको लागि बिक्री सफ्टवेयरको सही बिन्दु छनौट गर्न तपाइँले जान्नु पर्ने सबै चीजलाई कभर गर्दछ। यति धेरै फरक समाधानहरू उपलब्ध छन्, अगाडि केहि अनुसन्धान गर्न र यसलाई तपाइँको ब्रान्डको आवश्यकताहरूसँग मेल खाने एक पहिचान गर्न महत्वपूर्ण छ।
के पोइन्ट अफ सेल सिस्टम वास्तवमै आवश्यक छ?
केही व्यवसायहरूले बिक्री समाधानको पोइन्ट बिना नै लागत घटाउने प्रयास गर्दछन्, तर यो लगानीको सम्भाव्यता छ तपाईको कम्पनीका लागि पैसा कमाउनुहोस्। तपाईंले सदस्यतामा खर्च गर्नुभएको थोरै रकम तपाईंको हरेक वर्कडेलाई बचत गर्ने समय र पैसाको तुलनामा केही पनि होइन।
लेनदेनको सुविधाका साथै, समकालीन बिन्दु बिक्री अनुप्रयोगहरूले तपाईंको व्यवसायको प्रत्येक पक्षलाई बढी सहज रूपमा चलाउनको लागि डिजाइन गरिएको उपकरणहरूको विशाल सूट प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं ग्राहक सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गर्न चाहानुहुन्छ, उदाहरणका लागि, तपाईं बिक्री समाधान पाउनुहुनेछ जुनमा वफादारी कार्यक्रमहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू समावेश छन्। यसका अलावा, धेरै सेवाहरू शिपिफाइ र शून्य जस्तै अन्य लोकप्रिय अनुप्रयोगहरूसँग सिमलेस एकीकृत गर्दछ।
बिभिन्न व्यवसायका लागि बिभिन्न प्रणाली
पोइन्ट अफ बिक्री सेवाहरूले दुबै अनलाइन विक्रेताहरू र शारीरिक स्टोरहरूको साथ व्यवसाय सहित कम्पनीहरूको एक बिभिन्न सेटलाई लक्षित गर्दछ। ध्यानमा राख्दै, तपाईलाई बजेट र तपाईंको ब्रान्डको आकारसँग मेल खाने विकल्प फेला पार्न कुनै समस्या हुनुहुँदैन।
थप, अधिक र अधिक प्रणालीहरू क्लाउड-आधारित दृष्टिकोणमा सर्दै छन् जुन जानकारीलाई कुनै पनि व्यक्तिगत उपकरणबाट विच्छेदन गरेर विकेन्द्रीकरण गर्दछ। जबकि परम्परागत प्रणालीहरू अझै उपलब्ध छन्, क्लाउड-आधारित विकल्पहरू झन् झन् लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ।
Key मुख्य विचारहरू POS चयन गर्दा
हार्डवेयर - बिक्री प्रणालीको बिभिन्न बिन्दुहरु हार्डवेयर को बिभिन्न प्रकार संग काम गर्न को लागी डिजाइन गरीएको छ, र तपाईको विकल्पहरु तुलना गर्दा तपाईले हार्डवेयर लागतहरु लाई विचार गर्नु पर्छ। यदि तपाईं POS केवल एक फोनको साथ चलाउन सक्नुहुनेछ, उदाहरणका लागि, तपाईं कार्यक्षमता सुव्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ जबकि थोरै देखि नो ओभरहेड थप्दै। अर्कोतर्फ, केहि कार्यक्रमहरू ट्याब्लेटहरू वा समर्पित उपकरणहरूसँग राम्रोसँग काम गर्दछन् जसले पर्याप्त रूपमा अधिक लागत लिन सक्दछ। यसका साथै ठूला व्यवसाय र रेष्टुरेन्टहरू प्राय: हार्डवेयरको विस्तृत दायरा चाहिन्छ, रसिदहरूको लागि प्रिन्टरहरू, टेबल प्रबन्धनको लागि टर्मिनलहरू, र अधिक सहित।
भुक्तान गेटवे - एक POS प्रणाली खरीद स्वचालित रूपमा यो मतलब छैन कि तपाइँ क्रेडिट कार्ड भुक्तान को एक माध्यम एकीकृत गर्नुभयो। जहाँ प्राय POS प्रणालीहरू क्रेडिट कार्ड रिडरको लागि पूर्व कन्फिगर गरिएको छ, अन्यलाई कन्फिगरेशनको आवश्यक हुन सक्छ, जुन तपाईंलाई खर्च लाग्न सक्छ। एक POS खोज्नुहोस् एकीकृत कार्ड रिडरको साथ वा एउटा जुन तपाइँको भुक्तानी प्रोसेसर र गेटवेबाट क्रेडिट कार्ड रिडरसँग एकीकृत गर्न सक्दछ।
तेस्रो-पक्ष एकीकरण - धेरै व्यवसायहरू पहिले नै धेरै उत्पादक उपकरणहरू प्रयोग गर्दछन्, र यो बिक्री सेवा पोइन्ट खोज्न महत्त्वपूर्ण छ जुन तपाईंको अवस्थित अभ्यासहरूसँग राम्रोसँग काम गर्दछ। लोकप्रिय एकीकरणहरूले लेखा प्रणाली, कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली, इन्भेन्टरी प्रणाली, ग्राहक वफादारी प्रणाली, र शिपिंग सेवाहरू समावेश गर्दछ। स्क्वायर प्वाइन्ट अफ सेलिस प्रणाली, उदाहरणका लागि, ईकमर्स देखि मार्केटिंग र लेखा को लागी सबै चीजको लागि विभिन्न तेस्रो पार्टी प्लेटफार्मको जोड्दछ। एकीकरण बिना, तपाईंको संगठनको रणनीतिहरूमा नयाँ सेवाहरू थपेमा अनावश्यक कुञ्जी कार्यहरू जटिल हुन सक्छ। प्वाइन्ट अफ सेल प्रणाली सबै दक्षताका बारे हुन्, त्यसैले यो अन्य अनुप्रयोगहरूसँग कुराकानी नगर्ने प्लेटफर्म प्रयोग गर्नका लागि प्रतिउत्पादक हो। उदाहरण को लागी, एक लेखा सेवा मा लेनदेन को स्वचालित रूप बाट आयात गर्न को लागी अनुप्रयोगहरु को बीचमा हस्तान्तरण भन्दा धेरै कुशल छ।
सुरक्षा - उपभोक्ताहरू पहिले भन्दा आफ्नो गोपनीयता अधिक गम्भीरतासाथ लिन्छन्, र डाटा ह्याक्स आश्चर्यजनक रूपमा सबै आकारको व्यवसायहरूमा सामान्य छन्। प्रबन्धकहरू प्राय: डाटा सुरक्षित राख्नको महत्त्वलाई कम महत्त्व दिदैनन्, र यो विशेष गरी प्रासंगिक हो जब ग्राहकहरूले संवेदनशील जानकारी जस्तै क्रेडिट कार्ड नम्बरहरू प्रदान गरिरहेका छन्। को भुक्तान कार्ड उद्योग बिक्री प्रणाली र भुक्तानी प्रशोधनको अन्य विधिहरूको लागि उचित सुरक्षा मापदण्ड वर्णन गर्दछ। प्रख्यात कार्यक्रमहरू यी मानकहरूसँग सामान्य रूपमा अनुरूप हुन्छन्, तर तपाईं थप बलियो सुरक्षाहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै डाटा टोकनाइजेसन र अन्त देखि एन्क्रिप्शन। सुरक्षा तपाईंको शीर्ष प्राथमिकताहरूमध्ये एक हुनुपर्छ जब एक विश्वसनीय POS अनुप्रयोग खोज्दै।
समर्थन - तपाईं समर्थनलाई एक महत्वपूर्ण सुविधाको रूपमा सोच्नुहुन्न, तर एक गरीब समर्थन नेटवर्क तपाईंको बिक्री प्रणाली को उपयोग गर्न को लागी अधिक गाह्रो बनाउन सक्छ। विश्वसनीय विकल्पहरूले लगातार समर्थन प्रदान गर्दछन् र तपाईंलाई मुद्दाहरूको समस्या निवारण गर्न मद्दत गर्दछ तपाईंको व्यवसायलाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पार्नु अघि। यदि सम्भव छ भने, तपाइँले एक सेवा खोज्नु पर्छ जुन २//24 समर्थन प्रदान गर्दछ। यो जान्नु महत्वपूर्ण छ कि कसैले प्रणालीलाइ जवाफ दिनेछ जब तपाईलाई प्रणालीमा समस्या आयो। केही अनुप्रयोगहरूले नयाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई साइटमा मद्दत पनि दिन्छन् किनकि उनीहरूले पहिलो पटक सेवा सेट अप गरे। साना व्यवसायहरूले प्राय: बिक्री समाधानको बिन्दुमा लगानी गर्न रोक्दछन्, तर उच्च-गुणस्तर सदस्यता यसको मूल्यवान् हुन सक्दछ कुनै पनि आकारका कम्पनीहरूका लागि। यी केवल केहि सब भन्दा सान्दर्भिक कारकहरू दिमागमा राख्नको लागि जब बिक्री सेवाहरूको बिन्दु तुलना गर्नुहोस्।
टैग: क्लाउड POSक्लाउड-आधारित पोष्टमोबाइल पोष्टहरूभुक्तानी गेटवेस्थानपोष्ट हार्डवेयरपोस सफ्टवेयरटच स्क्रिन
पाँच मार्केटिंग ट्रेन्ड्स सीएमओहरूले २०२० मा कार्य गर्नु पर्छ
फिचर गरिएको छविको लागि WordPress सक्षम र अप्टिमाइज कसरी गर्ने